शिर्षक छानेर पुरस्कार जित्नुस :: NepalPlus
साथीहरु झण्डै एक वर्ष हुन लागेछ मैले यो ब्लग निरन्तर गरेको । मैले जस्तो देखें भेटे त्यस्तै लेखें सकुन्जेल । यसमा मलाई तपाईहरुको हौसला र आत्मसन्तुष्टि प्राप्त भयो । अरु केहि मागिन । तर आज म तपाईहरुसित एउटा सुझाब माग्छु । फेरि त्यस्तो सुझाब कि त्यो छनौटमा पर्‍यो भने तपाइहरुले पुरस्कारपनि पाउनुहुनेछ । सित्तैमा होइन । के होला त त्यो ?
मेरो दोस्रो पुस्तक निस्किँदै छ । दुई तिन महिनाभित्रमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । लेखेर सकियो । अहिले संपादनकालागि पठाइएको छ । प्रकाशक पाउन कठिन नेपाली बजारमा हाम्रो पुस्तक छाप्छु भन्नेको चाहिं हारालुछ छ । त्यसैले प्रकाशक छान्दै गरौंला । मैले यहाँ हामी किन भनेको भने यो पुस्तकको मुख्य लेखक म र सहायक लेखिका अनुराधा पौडेल हुनेछिन । जसले जति काम गर्‍यो त्यसैका आधारमा मुख्य र सहायक हुन लागेका हौं । म अहिले त्यो पुस्तककालागि ऐतिहासिक तस्बिरहरु खोज्ने, माग्ने र छान्ने क्रममा छु । संपादन हुनुअगाडि मैले ति तस्बिर पठाउनु छ ।
दिनको आठ घण्टा काममा खटिनु । केहि समय घर परिवारकालागि छुट्याउनु । केहि समय वातावरण जिवजन्तुको अध्ययन गरेरपनि यो पुस्तकका लागि खटिँदा मैले ब्लगलाई धेरै ध्यान दिन सकिन । फेरि कुनै गहिरो विषयगत अध्ययन र पुस्तक लेखनको जति योगदान, चर्चा, विश्वास ब्लगले हाँसिल गर्न सक्ने अवस्था अहिलेका लागि छैन । चाहे मैले मेरो ब्लगलाई जतिसुकै लोकप्रिय बनाउन सकौं । ब्लगको उचाई अहिलेनै पुस्तक प्रकाशन वा अन्य दैनिक र साप्ताहिक पत्रपत्रिकामा लेख रचना प्रकाशित गराए सरह पुगिसकेको छैन । र निकट भविष्यमै पुगिहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यहि कारणले गर्दापनि मैले ब्लगकै लागि पूर्ण समय दिन चाहिन ।
विषय के र कस्तो हो त किताब ?
किताब खासगरि ३० जना विशिष्ठ फ्रान्सेलीहरुको नेपाल संबन्धि काम, देखाई, भोगाई, अध्ययन, अनुसन्धान, किर्तीमान,अनुभूति र अनुभव संबन्धि हो । अर्थात नेपालमा अध्ययन वा अनुसन्धान गरेका, नेपालको हिमाल चढेर किर्तिमान कायम गरेका, नेपालमा मानविय र परोपकारी काम गरेका वर्षौं वर्ष देखि, नेपालमा वर्षौं पुराना परियोजना चलाएका, नेपालको पहिलो राजदूत,राजा वीरेन्द्रका साथी, नेपालको पर्यटनको पहिलो खाका कोर्ने ब्यक्ति, राजा वीरेन्द्रका सैनिक हेलिकोप्टर प्रशिक्षक, राजा महेन्द्र लगायत उनको परिवार आएर फ्रान्समा जहाँ बसे त्यो घरका मानिसको अनुभव, नेपालका हिमालमा ३० वर्षभन्दा अगिदेखि हिम चिप्लेटी गर्नेको अनुभव । कोहि यस्ता छन हाम्रा पुस्तकका पात्र कि उनी नेपाल जाँदा राणा प्रधानमन्त्री थिए । जसले नेपालमा पहिलो गाडि भित्राउँदै गर्दा त्यो गाडी बोक्ने भरियालाई उछिनेर काठमाडौं पसेका थिए ।
एक जना राजा वीरेन्द्रका गुरु छन । दरबारमै गएर उनलाई पढाएका । कोहि काठमाडौंदेखि धरान, धनकुटा, दाङ, पोखरा पैदलमा अनुसन्धान गर्दै हिँडेका पात्र छन । कोहि नेपालको चाखलाग्दो कूटनितिको कुरा गर्छन त कोहि नेपालमा सन १९९० को भन्दा तिस गुणा ठूलो भूकम्प जाने ठोकुवा गर्छन । तर तर्क सहित । कसैले नेपालका फूलै फूलका बारेमा किताब लेखेका छन नेपालका पहाडि गाउँमा २० हजार किलोमिटर भन्दा बढि पैदल चहारेर ।
कोहि नेपालको न्रित्य र गितको प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्ने छन् यूरोपभरि । कोहि जिवनभरि नेपाली भाषा पढाएर बस्ने छन । कोहि नेपालको निर्वाचन अनुगमन गर्न गएका पूर्व सांसद, कोहि मन्त्री छन । कोहि नेपालकालागि स्कूल बनाउन फ्रान्सदेखि लरी (ठुलो ट्रक) मा सामान हालेर महिना दिन भन्दा बढि लगाएर बिभिन्न मुलुक पार गर्दै नेपाल पुगेका छन । यस्तै यस्तै । यि ३० पात्रले कम्तिमा २०० भन्दा बढि नौला विषयका बारेमा बोलेका छन ।
त्यसैले यो पुस्तकले नेपाल-फ्रान्सबिचको संबन्ध, थप अध्ययन, फ्रान्सेलीले के खोज्छन लगायतका धेरै विषय खोतलेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । नेपाल फ्रान्सबिचको निति निर्माण गर्नपनि नेपाललाई सहयोग पुग्ने छ । नेपालीहरुलाई फ्रान्स संबन्धि अध्ययन गर्न मात्रै नभएर नेपालमा अध्ययन गर्न चाहने फ्रान्सेलीहरुकालागि यो पुस्तकले थुप्रै विषय सुझाउने छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
पुस्तकमा एरिक भालीदेखि नेपालका प्रथम आरोही मोरिस हेर्जोग (सन १९५० मा फ्रान्सेलीले पहिलो पटक नेपालको हिमाल चढेको) । नेपालका प्रथम राजदूत फ्रान्सिस द नोईयलसम्मले आआफ्ना विषयमा चाख लाग्दा कुरा गरेका छन । पुस्तकमा सबै पात्रले म भनेर बोल्छन । यो आत्मब्रितान्तका रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । तर पारिवारिक र झिझ्याहट लाग्दा सबै कुरा नभएर विषयगत जानकारि हुन्छन किताबमा ।
यि सबै सँगको भेट प्रत्यक्ष हो । हामीले लिखित र फोन वार्ता पुरै अस्विकार गरेका थियौ । कोहि त यस्ता फ्रान्सेली पनि थिए जसले ‘तपाईले नेपालका बारेमा चासो राख्ने फ्रान्सेलीबारे किताब लेख्दै हुनुहुन्छ रे, मपनि यस्तो काम गर्छु । मलाईपनि तपाइको किताबमा समावेश गर्नुस’ भने। किताबका पात्र जो छन ति मानिसहरु हामीले छानेका हौं विषय, प्रसंग, नेपालकालागि महत्व र कत्तिको चाख लाग्दो छ भन्ने हेरेर । यि सबैसँग सम्पर्क हुन मैले कम्तिमा ३०० पटक ईमेल र पत्र लेखेछु । दुई जनाले हामीलाई फोटो उपलब्ध गराए आफ्नै तर्फबाट । नत्र बाँकि सबैको आफैंले खिचिएको छ तस्बिर । र ति मानिसहरुसँग संबन्धित ऐतिहासिक तस्बिरपनि हुनेछन किताबमा ।
अब समस्या पर्‍यो कस्तो नाम राख्ने ?
हामीले “मैले देखेको नेपाल” राख्न खोजेका थियौं । तर त्यो नाममा त डा. हर्क गुरुङले एउटा किताब लेखिसकेका रहेछन । त्यसपछि मैले केहि नेपाली पत्रकार मित्र र केहि फ्रान्सेली मित्रहरुसित नाम दिन सुझाव मागें । तर मिल्ने नाम फेला परेको छैन । त्यसैले म तपाइ साथीहरुसित उपयुक्त नाम सुझाव दिन आग्रह गर्छु । तपाइहरुले दिएका नाम गोप्य राखिनेछ किताबको नाम दर्ता नभएसम्मकालागि । तपाइले सुझाएको नाम छनौटमा परेमा तपाइ जुनसुकै देशमा भएपनि एक प्रति किताब उपलब्ध गराइने छ ।
पुस्तक सक्भर फ्रान्सेली भाषामापनि प्रकाशित गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच छ । त्यसैले, तपाइहरुले आत्मब्रितान्त खालको, फ्रान्सेलीले के देखे, के पाए, के भोगे नेपालमा भन्ने खालको पुस्तककालागि बिदेशीलाईपनि सुहाउने खाले, छोटो, मिठो, स्पष्ठ र आकर्षक नाम सुझाएर मलाई सहयोग गर्नुहोस भन्ने मेरो आग्रह छ । र नेपालीबाट फ्रान्सेली भाषामा अनुवाद गर्न सक्ने सक्षम ब्यक्तिको खोजिपनि भैरहेको छ । त्यस्तो ब्यक्ति जसले शाब्दिक आनुवाद होइनकि भाव बुझेर गरोस । जो लेखनशैलीपनि भएको होस ।